NAIROBI, Kenya - Sakiina Maryan Cabdalla, hooyada maskaxdii ka dambeysay hujuumkii Hotel-ka DusitD2, Cali Saalim Gicchung, ayaa loo dacweeyay in ay ku guuldareystay in ay Booliska siiso xog ku saabsan halka uu ku sugan yahay wiilkeeda.
Baarayaasha ayaa sheegaya in mudadii u dhaxeysay 2015-kii illaa iyo 2019-kii ay ku Sakiina ku nooleed Kula Mawe oo ka tirsan Isiolo County, balse xiligaasi ay ka gaabisay in ay sheegto goobta uu inankeeda joogo.
Dacwad-oogayaasha ayaa tilmaamaya in xogta ay iyada haysay hadii ay bixin lahayd laga hortegi lahaa weerarkii dhismaha Riverside ee 15-kii bishii hore kaasi oo lagu dilay 21 qof, ayna sheegatay Al-Shabaab.
Marwo Cabdalla ayaa ku andacooneysa in aanu gelin wax dambi ah, hasa yeeshee cidna dhag-jalaq uma aysan siniin.
- Dalab damaanad kusii deyn -
Dalabkeeda ku aadan damaanad kusii deyn ayaa la dhageystay galabnimadii Jimcada, waxaana la filayaa in xeer-beegtadu garabka ku dhufato.
Iyagu waxa ay ku doodayaan in ay iyadda u muuqato mid dooneysa in ay baxsato oo ay ka cararto guud ahaan dalka Kenya.
Baaris lagu sameeyay telafoonkeeda ayaa lagu qaaday in ay si joogto ah ula xiriirto shaqsiyaad ku sugan Soomaaliya, sida ay sheegtay xeer-ilaalinta.
Dambi baarayaasha ayaa rumeysan in dadka ay la xiriireyso uu kamid yahay wiilkeeda, sida ay kasoo xigatay warbaahinta.
Sakiina ayaa la xiray bishii hore markii uu dhacay weerarka kaasi oo qaatay muddo ka badan 10-saacadood si loosoo afjaro.
Tobaneeyo ayey Kenya u xirtay weerarkii DusitD2, kaasi oo noqonaya midkii ugu cuslaa oo ay Al-Shabaab ka geysto magaalada Nairobi sanado kadib, iyada oo todobaadkaan la filayo in maxkamad lasoo taago shaqsiyaad la haysto oo ay Soomaali ku jiraan.
Afrika 26.01.2019. 22:42